Gemlight Cutting Tools Co., Ltd. dia naorina tamin'ny taona 1990, ary ny orinasa vaovao dia natsangana tamin'ny taona 2000 tao amin'ny Shuangtian Industrial Park, Dinngningdian Town, Dingzhou City. Ny orinasa vaovao dia manarona faritra 12000 metatra toradroa ary nandalo ny fanamarinana ny rafitra iraisam-pirenena toy ny ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, ISO45001: 2018, ary nahazo ny fanamarinana TUV, SGS.
Manana fantsom-panafody sy famonoana hafanana miaro tena miaro ny tontolo iainana izahay, izay mampiasa entona voajanahary sy herinaratra ho angovo hafanana hiarovana ny tontolo iainana sy hanatsarana ny tontolon'ny mpiasa. Machetes 40000 no hafanana isan'andro amin'ny andalana roa, ary manana mpiasan'ny kalitao dimy izahay mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny fenitry ny ozinina ny fisaka, ny hamafiny ary ny hamafin'ireo lelany.
Miaraka amin'ny tsipika famonoana mari-pana roa voamarina ny tontolo iainana sy ny hafanana, ny hafanana roa dia manasitrana machetes 40000 isan'andro. Ny tsipika roa dia mampiasa entona voajanahary sy herinaratra ho angovo fanafanana, mampihena amin'ny fomba mahomby ny fandotoana ny loto sy ny poti, manadio ny tontolon'ny mpiasa ary mampihena ny entona. Miaraka amin'ny mpiasan'ny fanandramana 5 an'ny QC dia miantoka ny fisaka, ny hamafiny ary ny hamafin'ireo lelany, ka ny vokatra rehetra miala amin'ny ozinina dia mifanaraka amin'ny fenitry ny ozinina.
Miaraka amin'ny R&D 10 dia tompon'andraikitra amin'ny fanohanana ara-teknika ny fitaovan'ny orinasa. Manana patanty modely azo ampiasaina hatramin'ny 12. Miaraka amin'ny sampana fikojakojana teknika sy ny departemanta R&D dia mamorona sy manavao hatrany izy ireo. Ny kalitaon'ny orinasa dia azo antoka azo antoka, ary amin'ny fahombiazan'ny famokarana hanatsarana, hampihena ny vidin'ny famokarana, hahasoa ny ankamaroan'ny mpanjifa.
Manaraka ny foto-kevitry ny "Quality is Life" isika, manaraka ny fahamendrehan'ny orinasa, miaraka amin'ny vokatra sy serivisy kilasy voalohany ho an'ny mpanjifa eran'izao tontolo izao!